HomeTurkeyCentral Anatolia Region06 AnkaraObodo C Smart na Ọchịchị Mgbakọ amalite na Ankara
15 / 01 / 2020 06 Ankara, Central Anatolia Region, eme, General, Isi akụkọ, Turkey
Obodo ndị amamihe na ndị isi obodo malitere na ankara
Onye isi ala Recep Tayyip Erdoğan kwuru, da Ọ nweghị ihe kpatara obodo a na-enweghị mmadụ, ebighi ebute ọdịmma ndị mmadụ ụzọ, na enweghị ihe ọmụma, amamihe na ebe nka. Anyị chọrọ obodo ndị ma ihe ma ama na mmepe anya. ”
Obodo agaghị enwe ike iru agadi
Mgbe ọ na-ekwu okwu na Smart Cities na Municipalities Congress, nke chọrọ ịgbasa ngwa teknụzụ smart smart ma nwekwuo ụkpụrụ nnyefe ọrụ na obodo, Onye isi ala Erdoğan kwuru na obodo ndị na-enweghị ike ịgafe afọ ndụ ha ga-efunahụ ịma mma ha mgbe obere oge.
INYERE AKA NA-EBURU EDBỌ ỌD NEW ỌZỌ
Erdoğan kwuru na ha ga-echekwa akụkọ ihe mere eme, ọdịnala na mmepeanya n’obodo ndị ahụ, na ha ga-echigharịkwute ego ha na-akwụ ụgwọ maka ihe ọhụụ. Ọ sịrị.
ANY TO NA-EME KA Ha
Erdogan kwuru na obodo nke na-enweghị agwa, ọ naghị ebute ndị mmadụ ụzọ, enweghị uche nke obodo na-enweghị ihe ọmụma, amamihe na njiri mara nka gbara gburugburu. Maka nke a, anyị chọrọ obodo ndị ma ama na njiri mara nke mmepe anya. Anyị enweghị ike ijere obodo anyị ozi nke ọma na-ejikọtaghị ha abụọ. ”
ỌR SM ỌR SM N'SMLỌ EGO
Erdogan, dị ka Turkey, na-akọwa na ha malitere ọrụ ịzụlite ha smart obodo atụmatụ, "First National Science and Technology Policy 2003-2023, ọgụgụ isi obodo me ọrụ ha chọtara a ebe ke Strategy Akwụkwọ bụ ugbu a nnọọ elu. Dịka ọmụmaatụ, Atụmatụ mmepe anyị iri na otu gụnyere ụzọ zuru oke banyere okwu a. N'otu aka ahụ, Ministry of Environment na Urban Planning akwadebewo atụmatụ 11-2020 National Smart Cities Strategy na Action Plan ma mee atụmatụ na mpaghara na-achịkwa mpaghara.
AKW OFKWỌ AKW WITHKWỌ AKW WITHKWỌ AKW WITHKWỌ AKOUTKỌ
N’okpuru na ha kpebisiri ike ijide n’aka na itinye ego na obodo na usoro niile ewerere dabere na atụmatụ amamihe obodo, Erdoğan kwuru na ha enweghị ike ịlaghachi oge nke enweghị ego, aka ike, enweghị atụmatụ, enweghị akwụkwọ, enweghị akwụkwọ, azụmaahịa.
Inno n'ọtụtụ ebe
N’okwu ya na emume ahụ, Minista Mmepụta na teknụzụ, Mustafa Varank mere ka ọ pụta ìhè na ime obodo na ime obodo bụ ihe anya, njikwa ike obodo ukwu, mkpụmkpụ efu, azụmaahịa, njem, nchekwa, nchekwa na ahụike na ọtụtụ mpaghara, dịka okike, o kwuru.
AKW NEWKWỌ AKW NEWKWỌ AKW NEWKWỌ NT OFKW OFKW 20KW XNUMXKW XNUMXKW XNUMXKW XNUMXKWỌ UKWU NT XNUMXKWU NKE XNUMX
Dabere na nyocha ndị e mere n'oge na-adịbeghị anya, Minista Varank mere ka ọ pụta ìhè na usoro amamịghe obodo ga -emepụta akụnụba ọhụrụ nke opekata mpe ijeri dọla iri na afọ 10. chọrọ. Nhazi nke data na - esite na mpaghara dị iche iche, ịkọwa oge nke netwọkụ dijitalụ nke obodo, ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke obere na nnukwu ngwaọrụ iji gwa ibe ha okwu.
Turkey NDỊ ụgbọala
Varank, ka a smart obodo nke ga-eme n'ọdịnihu R & D na ọhụrụ na onye mesiri ike na ọ dị mkpa ka izute, "Turkey si smart obodo ụgbọ ala-achọ ndị kwuru na zuo ezu anyị ọhụụ. Ọ bụ gburugburu ebe obibi na-eme ka ebumnuche a karịa ọrụ ụgbọ ala. ”
AKESTKỌ AKESTKỌ AKESTKỌ AKESTKỌ
Varank kpọkuru ndị isi ala ka ha jiri ngwaahịa mpaghara wee kwuo, sịsinde Anyị nwere ike nweta ntughari na nhazi mba n'ọtụtụ ebe maka etu esi etinye ego na ịzụrụ ọhaneze. Anyị na-agwa obodo anyị na uru ọnụọgụ iri na ise dị na ngwa ahịa ekwuputara nke ọma na iwu ahụ na-etinye n'ọrụ nke ọma na ngwaahịa nwere ọkwa teknụzụ dị elu. Nwere ike ime ka anyị na ndị ọrụ anyị na-arụkọ ọrụ ọnụ n'ihe metụtara ụlọ ọrụ maka nhazi nke ogologo oge na ntinye nke ngwaahịa ụlọ na irite uru na ndụmọdụ ndị ọrụ aka n'ọkwa kachasị elu. "
ANYANWU NA MBA
Varank dọrọ aka ná ntị na agaghị ekwe ka ngwa ndị na-ewepu ngwa ụlọ na nkọwapụta ma kwuo, olabilir Enwere ike ịdị ngwa nke itinye ego gị, mana ọnọdụ a agaghị eme ka ị ghara ibunye ngwa ahịa ụlọ. Anyị ga-anakwere ịdị n'otu na ụmụ amaala dịka ụkpụrụ dị mkpa maka mmepe niile. Ọ bụrụ na anyị ga - ebuli uche a, ọ gaghị enwe ihe mgbochi ọ bụla na ọganiihu anyị n'ọtụtụ akụkụ nke ihe ịga nke ọma nchekwa anyị
Nchaji ụgbọ IHE Turkey NDỊ ụgbọala
Onye Minista gburugburu na obodo kwuru na e zigara Smart Cities Strategy Document ka gọvanọ nke ógbè 81 wee kwupụta na ngwa ndị obodo mara mma yana ndị gọvanọ na ime obodo ga-ebu ụzọ kachasị ngwa ngwa n'usoro eburu ụzọ kpebie. na-ekwu na wuru akụrụngwa nke odori ụgbọ maka ụgbọala Turkey si Minister Authority, ọ sịrị ndị ọhụrụ ụlọ ga-ike n'ime ndị a ụgbọ.
INYERE ANY UR NA-AKPANAGH UR AH URHB
Onye isi obodo nke Gaziantep nke polahin kwuru na obodo ndị ahụ bụ "obodo mara mma" n'ime atụmatụ ma kwuo na obodo ndị nwere ọgụgụ isi mejupụtara ihe ndị dị ka ndị isi, ọhụụ, mmefu ego, ọrụ na-eduzi ụmụ amaala, teknụzụ na ọdịbendị.
EGWU EGO N’ITYLỌ EGO N’ARTLỌ EGO
Mgbe okwu ndị a gachara, Mịnịsta Varank na itutionlọ Ọrụ, osote onye isi oche nke Onye isi oche Onye isi Iwu Obodo Şükrü Karatepe na Gaziantep Metropolitan Mayor Şahin gosipụtara Onye isi obodo ndị isi obodo ihe mara ọkwa Onye isi ala Erdoğan. Mgbe ahụ, Erdogan weere foto ncheta na ndị ọduọ tinyere aka na mmemme ahụ.
Mepee Mmalite ahụ
Onye isi ala Erdoğan mepere ihe ngosi Smart Cities and Municipalities tupu ememme a. Ememe mmeghe ahụ bụ ndị osote onye isi ala Fuat Oktay, onye bụbu Onye Ọchịchị Omeiwu na AK Party İzmir Deputy Binali Yıldırım, Minister of Industry and Technology Varank, Minister nke Environment na Urbanization na mayors.
Pọtisi nke Istanbul Istanbul na Nzukọ Ndị Isi Obodo nke Smart Cities
Ọ bụrụ na obodo na-arụ ọrụ
Nkwupụta nke Mayor Soyer maka Union of Municipalities nke silk Road
Document Smart nke Obodo
Obodo Smart Smart